Obi ụtọ na Valentines: 13,000 tọn okooko osisi zigara Ecuador
Home » Akụkọ ụgbọ elu » Obi ụtọ na Valentines: 13,000 tọn okooko osisi zigara Ecuador
LATAM Ibu ugbo ala
Ndị Colombia hụrụ Ecuador n'anya na LATAM Group nwere ike ịbịa zọpụta
LATAM Cargo Group nwere ezigbo arụmọrụ n'oge oge 2021 ụbọchị Valentine, nke ya na ụbọchị nne (Eprel na Mee) na-anọchite anya elu nke ọrụ mbupụ ifuru ọhụụ. Na 2021, ụlọ ọrụ ahụ buuru 7% karịa okooko osisi karịa na 2020, na-achịkọta ihe karịrị tọn 13,200.
Onu ogugu di nma bu n'ihi oru ndi LATAM na Colombia na Ecuador, n'agbanyeghị nnukwu nsogbu nke oria COVID-19 gbasara ikike. N'ezie, otu a abawanyela onyinye ịntanetị iji gboo mkpa nke ndị ahịa ya -N'okwu a ndị na-emepụta ifuru-dabere na njikọta na mbupụ iji kwado azụmahịa ha.
Iji maa atụ, n’oge nke malitere izu atọ tupu ụbọchị Valentine – Jenụwarị 18 rue Febụwarị 09– Otu LATAM wepụrụ ihe dị ka narị ugboro abụọ na iri abụọ na abụọ site na Bogota, Medellin na Quito bu ube ha, Roses ịgba, alstroemeria na gerberas si Colombia, na roses. , gypsophila na alstroemeria si Ecuador na United States.
Miami bụ ebe njem kachasị maka okooko osisi ọhụrụ ma bụrụkwa otu n'ime ogige nkesa kachasị ukwuu n'ụwa na ebe obibi maka ọrụ ibu nke LATAM Airlines Group. Site na ebe a, a na-ekesa okooko osisi tumadi na North America na Europe.
Tụnyere a oge, na Colombia ụlọ ọrụ ebu 7% ọzọ tọn kwa izu n'oge seasonpo seasonbọchị oge, ihe ịga nke ọma na-eje ozi ina si ifuru mpaghara.
Na Quito, Ecuador, agbakwunyere ikike ibuga mmepụta ifuru na Miami, na-abawanye ọnụ ọgụgụ tọn na-ebu kwa izu site na 7%, na iwulite ikike na Amsterdam (Netherlands), ebe nke abụọ maka okooko osisi Ecuador.
“Ọ bụ n’oge ihe isi ike dịka ọrịa a na-efe ugbu a ka egosipụtara nkwa anyị nye ndị ahịa anyị. Ọ bụghị naanị na anyị na-enye nhọrọ ụgbọ njem kachasị mma site na ibute ụzọ iji ụgbọ elu na-ebu ibu na ịgbakwunye ụgbọ elu ndị njem maka ibugharị okooko osisi naanị. Anyị agbakwunyela akara ngosi ọhụrụ iji were kuru okooko osisi si Colombia na Ecuador gaa ụwa, wee si otú a na-akwado azụmaahịa ndị ahịa anyị, ”ka Claudio Torres, Onye isi oche azụmaahịa South America na LATAM Cargo Group kwuru.
Ọ bụ ezie na a na-emepụta okooko osisi na mpaghara dị iche iche na mba ahụ, na Colombia mpaghara Cundinamarca dị nso na Bogota na-enweta 76% nke mbibi a, Antioquia na-esote ya na 24%.
Na Ecuador, mpaghara ndị na-ewepụta ihe bụ Pichincha na mpaghara Andean nke Cotopaxi.
Abu Dhabi ma ọ bụ Dubai na Melbourne akụkọ ihe mere eme maka oge ahụ
Auckland, New Zealand na Lockdown: A gwara ndị ụgbọ elu